Microsoft yagadzira Windows Calculator kuvhura sosi | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yagadzira Windows Calculator kuvhura sosi
Microsoft yakagara iri mutsigiri weiyo isiri yemahara software ideology, ideology iyo iyo kambani yakagadzira mabhiriyoni emadhora. Nhoroondo, iyo kambani yaipesana neruzhinji, yakavhurwa sosi mapurojekiti seLinux.
Nekudaro, pasi pehutungamiriri hwaSatya Nadella, Microsoft isangano rakasiyana kwazvo. Kwete chete inotsigira yakavhurwa sosi neLinux, asi zvakare inounza kodhi kune yakavhurika sosi yenyika.
Zvechokwadi, Microsoft yazova mumwe wevanopa rubatsiro. Uye nezuro vanhu veWindows vakazivisa izvo zvinotoenderera zvakanyanya mukuzvipira kwayo kuvhura sosi ideology. Sezvazviri kuita gadzira yako Windows Calculator chirongwa chirongwa open sosi paGitHub.
Mune blog blog, Microsoft iyo:
Nhasi, tinofara kuzivisa kuti tiri kuburitsa iyo Windows Calculator kodhi paGitHub pasi peMIT rezinesi. Izvi zvinosanganisira kodhi yekodhi, kuvaka system, zviyero zveyuniti, uye chigadzirwa mugwagwa.
Chinangwa chedu ndechekugadzira irinani zvirinani mushandisi ruzivo mukubatana nenharaunda. Tinokurudzira maonero ako matsva uye kuwedzerwa kutora chikamu kubatsira kubatsira kutsanangura ramangwana remuchina wekuverenga.
Sevagadziri, kana iwe uchida kuziva mashandiro anoita zvikamu zvakasiyana zveCalculator, nyore nyore kubatanidza iyo karukureta kana mushandisi mushandisi muzvishandiso zvako pachako, kana kupa mupiro wakananga kune chimwe chinhu chakabatanidzwa neWindows, izvozvi zvave kugona.
Calculator ichaenderera ichipfuura neyese yakajairwa kuyedza, kutevedzera, chengetedzo, mhando maitiro, uye inovaka inopihwa kune vashandisi vemukati, sezvatinoita nemamwe maapp
Wese munhu anogona kupa
Microsoft inokurudzira vanogadzira kuti vape kuWindows Calculator, ikozvino inowanikwa mune yakavhurika sosi, kuburikidza:
Tora chikamu munhaurirano.
Kunongedzera kana kugadzirisa matambudziko.
Kupa mutsva maficha maficha.
Kuziva kweye prototypes enew functionalities.
Kugadzira uye kutora chikamu mukuvakwa kwezvivakwa nemainjiniya ayo.
Calculator yeWindows parizvino inotakura nezvinhu zvinotevera:
Iyo yakajairwa modhi ye Calculator inopa yakakosha mashandiro uye inoongorora maodha nekukurumidza pavanongopinda.
Iyo sainzi Calculator inopa yakakura mashandiro uye inoongorora mirairo zvinoenderana nehurongwa hwekushanda.
Programmer Calculator mashandiro ayo anopa vanogadzira mashandiro anoita masvomhu, kusanganisira kutendeuka pakati pezvigaro zvakajairika.
Kuverenga nhoroondo uye ndangariro kugona.
Shanduko pakati pezvikamu zvakasiyana zvechiyero.
Shanduko yemari zvichibva pane data rakatorwa kubva kuBing.
Sezvo neshanduko dzese, Nhengo yetimu yeMicrosoft inoongorora kodhi yezvinhu zvitsva isati yachengetedza kubazi hombe.
Zvitsva zvitsva zvinowanzoda hunyanzvi hwekugadzirisa pane kugadzirisa bug. Paunenge uchiongorora kodhi yezvinhu zvitsva, timu yeMicrosoft inofunga zvinotevera zvinotevera:
Zvese zvinhu zviri pane yekuwanika yekutarisa zvinofanirwa kugadziriswa.
Zvese zvinhu zviri pasi rese yekutarisa zvinofanirwa kugadziriswa.
Iko shanduko inofanirwa kuyedzwa pane yekare vhezheni yeWindows inotsigirwa nechishandiso.
Unogona kuwana iyi vhezheni nhamba muAppxManifest.xml.
Yese API inodaidza nyowani kupfuura iyi vhezheni inofanirwa kuve inogoneswa nemamiriro.
Shanduko inofanirwa kushandisa chete inotsigirwa APIs. Kana paine mibvunzo nezve iko kushandiswa kwenhaka kana asina magwaro APIs, iyo Windows Application Certification Kit inofanira kunge ichimhanyisa kuongorora.
Pamusoro peizvozvo, kana shanduko ikawedzera maraibhurari matsva kana zvimwe zvinoenderana nechishandiswa se iwe unofanirwa kuyera saizi yakawedzera yemafaira emabhinari uye kana raibhurari isingatarisirwe neMicrosoft, timu yeMicrosoft inoda kutsanangura chirongwa chekutarisa kumusoro kwereibhurari yeshanduko, senge kuchengetedzwa.
Kana raibhurari ikashandiswa pasi peyakavhurwa sosi rezinesi, isu tinofanirwa kutevedzera rezinesi uye kubvumidza mapato echitatu nenzira kwayo.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kushanyira chirevo pane Microsoft blog. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Microsoft yagadzira Windows Calculator kuvhura sosi
Wow! M $ Inopa kuvhura-sosi macalculator. Izvo chete zvatinoda muLinux nekuti takanga tisina. Ndokumbirawo mese musimuke uye katatu kutenderera kwekuombera kuitira kuti musatarise kusaonga. Pakupera kwezuva, M $ kana achizviita, hazvifarire (sekutaura kwakaita mumwe kunze uko "kuti haufanire kuruma ruoko runopa sosi yakavhurika, nekuti M $ ndiyo" huru "inopa ") Zvakanaka, chii chingaunzwa mukutsinhana? Iyo Ziva Sei nezvekuti Linux inoburitsa sei vhezheni idzva isina makore gumi nemaviri pakati peimwe neumwe? Nahhh.
Pindura kuna 01101001b
Kutanga kwakanaka uye ndinofara nazvo. Ichokwadi kuti kana tichienzanisa nehunhu uhwo Microsoft iine neanokwikwidza akavhurwa sosi mapurojekiti seFirefox, iyo yavakavhara nenzira inosiririsa kubva ku Skype mune yayo vhezheni yewebhu, tichaona kuti chokwadi ichi chinongoshanda chete kumapurojekiti kuzviparadza sisitimu yavo. Asi hei, chimwe chinhu. Kana zvinhu zvikafamba mushe, icho chinangwa chinopararira kune mamwe mapurojekiti, ndezvechokwadi.
Izvo zveMicrosoft zvinofanirwa kunge zvisina kunyorwa ...
Iyo NSA yakaburitsa kodhi yeGhidra yekumisikidza mainjiniya fomati